अनुक्रमणिका द्रुत चिप: एक द्रुत, उत्तम EMV अनुभव | Martech Zone
अनुक्रमणिका द्रुत चिप: एक द्रुत, उत्तम EMV अनुभव
बिहीबार, मे 24, 2018 बिहीबार, मे 24, 2018 Douglas Karr
आज दिउँसो, म मेरी छोरीलाई उनको कार्यालयमा भेटें (बुबा म कती ठिक हुनुहुन्छ?)। म सडकमा पसलमा रोकिएँ, ताजा बजार र उनको डेस्क को लागी एक राम्रो फूल व्यवस्था उठायो र त्यहाँ स्टाफ को लागी केहि व्यवहार गर्दछ। जब मैले चेक आउट गरें, म दूर उडाियो ... मैले सम्मिलित गरें मेरो EMV क्रेडिट कार्ड र यो लगभग तत्काल काम गरे।
यो सब भन्दा छिटो हो मैले एक चिप सक्षम कार्डको साथ एक चेकआउट कार्य देखेको छु। त्यो मात्र होईन, मैले मेरो भुक्तानी पूरा गरे पछि मलाई प्रश्न गरे कि म मुद्रित रसीद चाहान्छु वा मेरो ईमेल ठेगानामा पठाउँछु। एक क्षण पछि मसँग मेरो रसिद र मेरो अर्को भ्रमणको लागि कुपन प्रयोगको लागि थियो। र कुपन प्रिन्ट गर्न आवश्यक पर्दैन, यो स्वचालित रूपमा लागू हुन्छ जब म समान क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दछु। Boom!
प्रणाली बारे जिज्ञासु, मैले माथि हेरे सूचकांक - प्लेटफर्म चेकआउट पॉवर गर्दै। यो बतास छ कि त्यहाँ आफ्नो टेक्नोलोजी को बारे मा केहि फरक थियो। तिनीहरूले EMV क्रेडिट कार्ड डाटा कब्जा र प्रमाणीकरण को लागी प्रसंस्करण सफ्टवेयर पुनःलेखन। तिनीहरूको प्रणालीमा चेकआउटको बखत तपाइँको कार्ड सम्मिलित गर्न र लिनको लागि क्षमता छ - तब तपाइँ पुग्न तयार हुनुहुन्छ एकपटक बिक्रीको पुष्टि गर्नुहोस्।
यहाँ कसरी एक सिंहावलोकन छ सूचकांक द्रुत चिप विकसित भयो, जहाँ तिनीहरूले चेकआउट प्रक्रिया १ सेकेन्ड सम्म प्राप्त गर्न सक्षम थिए! औसत भन्दा दस गुणा छिटो छ, चेकआउट गति र प्रयोगकर्ताको अनुभव सुधार गर्न।
ओह ... र ताजा बजार पनि राम्रो थियो!
टैग: चेकआउटemvसूचकांकबिक्री को बिन्दुस्थानद्रुत चिप
बोट्सलाई तपाईंको ब्रान्डको लागि बोल्न नदिनुहोस्!